आज विश्व पर्यटन दिवस : सोलुका लागि हिँडे बुलेट राइडर ! — Arthatantra.com
Arthatantra.com > अटो > आज विश्व पर्यटन दिवस : सोलुका लागि हिँडे बुलेट राइडर !
काठमाण्डौं । आज विश्व पर्यटन दिवसको अवसर पारेर सगरमाथा क्षेत्र अन्तर्गत सोलुखुम्बुको फाप्लु पुग्ने उद्देश्यका साथ बुलेट राइडरको एउटा समूह काठमाडौंबाट त्यतातिर प्रस्थान गरेको छ । २३ वटा बुलेट अर्थात रोयल इन्फिल्ड बाइकमा सवार ३० जनाको समूह धुलिखेल, नेपालथोक, खुर्कोट, ओखलढुंगा हुँदै फाप्लु पुग्ने छ ।
यस अवसरमा आयेजित कार्यक्रममा व्यवस्थापिका संसदको वातावरण समितिका सदस्य हरि उप्रेती र मिस एभरेष्ट २०१६ आकांक्षा भट्टराईले सो समूहलाई विदाई गरेका थिए । नासा बुलेट क्लबका महासचिव राम साहले रोड लिडरको रुपमा सो समूहको नेतृत्व गरेका छन् ।
कार्यक्रममा सांसद उप्रेतीले नेपाली युवाहरु विदेशी भूमिमा पसिना बगाएर पठाएको रेमिट्यान्सले धानिरहेको देशमा पर्यटन प्रवद्र्धनबाट पनि देशलाई फाइदा पु¥याउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण बुलेट राइडले प्रस्तुत गरको बताए ।
उक्त बुलेट राइडले करिब २ सय ३५ किलोमिटरको दुरी पार गर्नेछ । मौसमले साथ दिएमा सगरमाथा क्षेत्रको अवलोकन गरी फर्किन कार्यक्रम रहेको क्लबका अध्यक्ष प्रकाश लिम्बुले बताए । विश्व पर्यटन दिवसको अवसरमा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले नेपाल अटोले उक्त बुलेट राइड कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो ।
११ असोज २०७३, १२।००
२०७३ असोज ११ गते १३:१४ मा प्रकाशित
एनआरएन मलेसियाका अध्यक्षको नाम किन जोडियो 'आइएस' संग ?
चाडपर्वको अवसरमा दुग्धजन्य पदार्थमा मिल्दैछ विशेष छुट !
पुँजी बजारमा दिनभर ६१ करोडको कारोबार, नेप्से आज केही सुस्त
नेत्रहिन विश्वकप क्रिकेटमा नेपाल अष्ट्रेलियासँग १० विकेटले पराजित !